भदौ ५, सल्यान ।
सल्यानकाे बागचौर–कोटमौला–पातिहाल्न सडक खण्ड बर्षातले बिगारेपनि मर्मतकाे लागी कसैले चासाे दिएका थिएनन् । तर राेल्पाकाे सुकिदह(हलकाे गंगादेव) गाउँपालिकाले अाज केहि मर्मत भने गरेकाे छ ।
बागचाैर नगरपालिकाकाे मुख्य सडककाे रुपमा देखिने याे सडक वडा नम्बर ८ र ९ मा पर्दछ । बर्षातले बिगारेकाे याे सडक मर्मतकाे लागी धेरै अावाज सुनिए पनि कसैले चासाे देखाएन । यस अघि लेकाली अनलाइनले पनि अलपत्र परेकाे ४ कराेडकाे सल्यान बागचाैर–पातिहाल्न सडक, नेताहरु कुन बाटाे हिड्छन् हाेला ? भन्ने शिर्षककाे समाचार प्रकाशित गरेकाे थियाे ।
सडक मर्मतकाे लागी पटक पटक धेरै ठाउँबाट अावाज सुनिएपनि मर्मत नहुँदा गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष बिर बहादुर केसीले अाफै डाेजर ल्याएर सडक मर्मत गरेका हुन् । गंगादेव गाउँपालिले उत्पादित समान ढुवानी गर्नलार्इ यहि बाटाे प्रयाेग गर्ने भएकाले सडक मर्मत गरेकाे अध्यक्ष केसीले लेकाली अनलाइनलार्इ बताए । उनले भने-“हाम्राे ठाउँमा किसानले उत्पादन गरेका धेरै सामाग्रीहरु छन्, सडक मर्मत नहुँदा ति सामाग्रीहरू कुहियर जान थाल्य, त्यसैले सडक मर्मत गरेका हाैँ ।”
बाटाे सल्यानमै परेपनि बर्षातकाे समयमा बिग्रीएपछि कसैले मर्मत नगरेकाले अाफुहरु राेल्पाबाट अाएर मर्मत गरेकाे उनले लेकाली अनलाइनलार्इ बताएका हुन् । करिब १ लाख २५ हजार रकम खर्च गरेर बागचाैरकाे शारदा नदि देखि पातिहाल्न बजारसम्म सडक मर्मत गरेकाे उनले बताएका छन् । सडक मर्मत गर्दा पनि शारदा नदिमा पुल नहुँदा गाडी अावातजावात गर्न समस्या भएकाे उनकाे भनार्इ छ ।
यता बागचाैर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष माेहाेन चन्दले राेल्पाली अाएर बाटाे मर्मत गरेकाे अाफुले नदेखेकाे बताएका छन् । अहिले अाफुहरु काममा व्यस्त भएकाले सुकिदहले सडक मर्मत गर्याे या गरेन् भन्नेबारे अाफुहरुले नदेखाे उनले बताएका हुन् ।
‘सल्यानमा अाएर राेल्पाले सडक मर्मत गर्दा तपार्इहरुलार्इ लाजमर्दाे भएन र ?’ भन्ने लेकाली अनलाइनकाे प्रश्नमा वडा अध्यक्ष चन्दले बर्षातकाे समयमा सडक मर्मत नहुँने भन्दै अाफुहरुले नगरेकाे जवाफ दिएका छन् । अहिले मेसिन प्रयाेग गर्दैमा सडक सुधार नहुने समेत उनले बताए । वडा अध्यक्ष चन्दले भने- ” सुकिदहका गाउँप्रमुख अाफ्नाे गाडी स्कटिङ गर्नकाे लागी डाेजर ल्याएर अाएका हुन्, यसलार्इ सबैले सामाजिक संजालमा भाइरल बनाएका छन् ।” बर्षा याममा फेरी याे सडक बिग्रिएमा मर्मत गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा वडा अध्यक्ष चन्दले मर्मत गर्ने बताएका छन् ।
तर काेटमाैला डागीगाउँका एक स्थानीयले बागचाैर नगरपालिकामा बिग्रिएकाे सडक मर्मत साेहि ठाउँका जनप्रतिनिधिले नगर्नु लाजमर्दाे भएकाे बताएका छन् । लेकाली अनलाइनलार्इ फाेन गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् । उनले काेटमाैलाकाे दमाइगाउँ-सार्किगाउँ-डागिगाउँ जाने सडकमा पनि कसैकाे ध्यान नगएकाे बताएका छन् । पहिराेले बाटाे बिगारेपछि मर्मत सुधारकाे लागी नगरपालिका र वडा कार्यालयले चासाे नदिएकाे उनकाे दुखेसाे छ ।
साेहि सडककाे यसअघि प्रकाशित समाचार पढ्न छुटाउनु भयाे की ?
प्रकाशित मिति : २०७५ भाद्र ५ गते मङ्गलवार